ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သူမဘဝကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ချစ်သူလေးအကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ
ညှို့အားပြင်းလွန်းတဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ နိုင်ငံခြားသူလေးလို့တောင် အထင်မှားရလောက်အောင် လှရက်လွန်းသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို အရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရှာရှာလေးကတော့ လတ်တလောမှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူမဘယ်လောက်ထိ ကံကောင်းနေကြောင်း လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အရာရာ ပျောက်ဆုံးနေသလို ဖြစ်နေတဲ့ သူမရဲ့ဘဝလေးကို ပျော်ရွှင်မှုအတိ ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တဲ့ ချစ်သူကောင်လေးကိုတော့ ရှာရှာတစ်ယောက် ချစ်မဝဖြစ်နေတာပါနော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် နိုင်ငံခြားသားပေမယ့် သူမအပေါ် ဂရုတစိုက်နဲ့ ချစ်တတ်လွန်းတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးအကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ “I was lost before you came into my life. You washed away all the pain and helped me find myself again. Ever since from the night we first met, I was sure that we’re meant to be together. You give me so much strength, confidence, love and happiness. You always make sure that my day is beautiful even when you’re havingarough day. Thank you for being there when I needed you and always doing everything to help me through the tough times. You are such an amazing boyfriend my love. ♥️”
“မင်းမရောက်လာခင်က ငါဟာ အရာရာကို ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့။ မင်းကတော့ ငါ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေ မရှိတော့အောင် ဖြေရှင်းပေးရင်း ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်ရှာတွေ့အောင် ကူညီပေးခဲ့တယ်လေ။ ငါတို့နှစ်ယောက်အတူရှိရင် ပြီးပြည့်စုံပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်ဆိုတာကို စတွေ့ခဲ့တဲ့ ညကတည်းက သေချာသိခဲ့တယ်။ မင်းက ငါ့အတွက် အားအင်တွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေ၊ အချစ်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးတဲ့ကောင်လေးပေါ့။ မင်းဟာ ခက်ခဲနေတဲ့ အချိန်တွေမှာတောင် ငါ့ရဲ့နေ့ရက်တွေကို လှပစေသူတစ်ဦးဆိုတာ သေချာအောင် လုပ်ပေးခဲ့တယ်နော်။ ငါလိုအပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ ကူညီဖို့ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတတ်တဲ့ မင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းဟာ ငါ့အတွက်တော့ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ချစ်သူလေးပါပဲကွယ်။” ဆိုပြီး သူမအပေါ် အရမ်းကောင်းတဲ့ ချစ်သူရဲ့အကြောင်းကို ကြည်နူးစွာ ပြောပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာမှာ ထူးချွန်လွန်းတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ လက်ရှိမှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပြုလုပ်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီး၊ သူမမွေးနေ့အတွက် မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာတဲ့ ဥရောပက ချစ်သူကိုလည်း မြန်မာပြည်ကအလှအပတွေ ပြသရင်း အချိန်ပေးဖြစ်နေတာပါ။ နိုင်ငံချင်းမတူပေမယ့်လည်း နားလည်မှုအပြည့်ရှိကြတဲ့ သူမတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့ အရမ်းကို ချစ်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ချစ်တတ်လွန်းတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးကြောင့် ပျော်နေရတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ရှာရှာကိုချစ်ရင် share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ပုဒ်မ ၃ ခုဖြင့်အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အဆိုတော်အစ္စဏီအား ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ချမှတ်
အံ့သြမှင်သက်ဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံက တောင်ပေါ်ရွာလေးအလှကို ပြသခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
နန်းဆုရတီစိုးနဲ့ လက်ချင်းတွဲထားတဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းကို ထုတ်ပြောပြလာတဲ့ စည်သူနှင်းမိုး